9Round | Ahụike Ahụike na Ahụike | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»9Round Franchise
Onye njikwa mbanye Franchise
E Nwere Na:
Boutique mgbatị ahụ maka ndị na - etinye ego
- Ala ebe isi ala dị na UK -
Ego di ala: mepee nkeji 9Round iji kwụọ ụgwọ otu mgbatị ahụ mebere
Ndị ọrụ dị obere = obere isi ọwụwa HR
Brerụ ọrụ na-arụ ọrụ dị ihe dị ka ọnwa 2-4 n’ime otu, akwụghachi ụgwọ na-abụkarị ọnwa iri abụọ na anọ
Otu n'ime usoro ntinye ego kachasị dị na mpaghara mgbatị ahụ, 9Round bụ ntanetị ọkwa ụwa ihe karịrị 750 gyms studio Ọ na - arụ ọrụ ụwa niile ma atọọla ka ọ napụta ndị ahịa UK ọchụnta ego egoro, ma gosipụta echiche ha n'ụlọ.
Mee ka akụnụba gị dị elu
Onyinye amara nke agba ohuru bu ndi nwere ego, ha na enwe ezigbo mmasi ike na ahu ike. Imirikiti agbakwunyela 9Round dika mgbakwunye ego ọzọ wee gaa n'ihu n'ọrụ ha nwere ikike dị elu, ọrụ nkwekọrịta na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-agba azụmaahịa ọzọ (bụ).
Ngalaba mgbatị ahụ bụ mpaghara ama ama nke ụlọ ọrụ ahụike na ahụike, yana ụlọ ịkpụzi ụdị egwuregwu gyms bụ ihe mara mma na-ekenye oke ibu; ebe ndi gyms juru na igwe na-alu ibe ha agha.
Punching karịa nke fọdụrụ
Onye njikwa ụwa
Ebumnuche Bọọlụ bụ onye egwuregwu zuru ụwa ọnụ nke nwere ọnụọgụ ahịa azụmahịa dị na mpaghara ahụike na ahụike, gụnyere masịrị nke Snap Fitness. Gburugburu ụwa, nke a dị mkpokọta 6,000 gafere mba 28. Enwere ike iru ogo a naanị site na iji usoro ọrụ zuru oke na-arụ ọrụ, na-agba mbọ hụ na e mere ihe niile iji nyere ndị ọrụ aka ịga nke ọma.
Lingmepụta ụdị ngosipụta Fitness ahụ nyere nghọta dị oke ọnụ ahịa ahịa UK, mana ndị nwe anyị ka họọrọ igosipụta 9Round na ngalaba ndị njem ụgbọ elu isii na-arụ ọrụ ọtụtụ afọ tupu ha ebidopụta ịkpọsa ohere ọchịchị.
Ndị otu UK nọ na South West London ma na-enye nkwado na ọkwa ọ bụla nke njem gị, site na ngwongwo na-atọ ụtọ wee zụọ ndị otu njikwa gị na ịkwalite otu gị.
9Round vs gyms ọdịnala
Ndị mmadụ na-achọ inwetakwu mma na ọsọ ọsọ, arụ ọrụ mgbakwunye na gburugburu ebe dị mma karị ma na-eme mmiri. Anyị kwenyere na ụdị azụmaahịa anyị nwere ọtụtụ uru karịa gyms na franchises ọdịnala na mpaghara ndị ọzọ.
Oge kwesịrị ekwesị itinye ego - ụlọ ọgwụ dị mma na-aga nke ọma
PROPERTchọta AHYMAT PROPERT dịkarị mfe ma dịkwa ngwa karịa obere 1,000-1,500sq. ft nkeji
Ndị na - enye ọzụzụ ọzụzụ ga - amara ndị otu aha, n'adịghị ka ndị otu nnukwu mgbatị ahụ
Oge imeghe elekere asaa nke ụtụtụ - elekere 7 nke izu ụka, ngwụcha izu na-adabere n'ọnọdụ
Ego isonye n’onwa n’enwe ndi n’adaghachi azu karia iwegharia ahia
Nhọrọ nke itinye ego
Kpọtụrụ Matt iji tụlee ihe ị na-achọ ma hụ ma 9Round nwere ike ịbụ ezigbo ego maka gị. Followinggbaso ọkpụkpọ a, nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịbanye na ya ka ị ga-aga soro nkata na-ezute ma zute ndị otu otu United Kingdom na ndịda ọdịda anyanwụ London. Nke a ga - enyekwa gị ohere ilele mgbatị anyị na Wandsworth ma ghọta usoro 9Round n'ezie.
Anyị na-atụ anya ịnụ olu gị.
A Van based Franchise na inweta ego na-akparaghị ókè gbasara MAX MAX MAX MAX Fleet Ltd. bụ ezigbo ntọala valeting…
Nchịkọta Zedify bụ ihe ga-eme ka ihe mgbapụta zụta maka mbufe mbu na nke ikpeazụ n'obodo ukwu. Anyị na-enye azụmahịa maka ọrụ…
Gmata Ihe Ntugharị Kachasị B2B aha na UK na-aga nke ọma ịzụ ahịa ebe ọ bụ na 1979, onye mmeri gara aga nke ndị nwere anya ọjọọ bfa Franchise…
Nhọrọ Match na-enye ndị ọrụ nlekọta ka ha lekọta ụlọ, ụlọ ọrụ NHS, ụlọ ọrụ ahụike na ọrụ nlekọta ụlọ. Anyị na ị nwere ike…
Soro na HITIO Gym Revolution nke HITIO Gym na-enye ndị na-achọ azụmahịa ha na-esote ihe pụrụ iche site na ijikọta…
Ebumnuche Gọọmet Hog Roasts bụ ịghọ UK hog roast kachasị mma na ebe obibi. Gbado anya na ndị ahịa pụrụ iche…
Mmekorita Ememe Onwunne zuru ezu Ndi mmadu Franchise Gburugburu olili ozu zuru oke na-enye oru olili ozu ndi mmadu, nke n’egosiputa onye ahu…